Inhlonipho – iAfrika
Emakhasini adlule sike sabhunga ngayo indaba yenhlonipho kulengosi yolwazi lwesintu. Kulelikhasi ke sidlulela endabeni yokuhlonipha indlu noma izindlu ezithile egcekeni ngokubaluleka kwazo. Izindlu ke zihlonishwa ngokubaluleka kwazo kanye nezigaba zazo okuhambisana nenhlonipho ezinikwa yona. Indlu ebaluleke kakhulu ekhaya ile kanina womnumnzane, nayo ekayise ibalulekile kodwa ke umehluko uba la ekutheni indodana uma isiphuma umuzi wayo … Read more
Tags Inhlonipho, Izindlu
Kulamakhasi adlule sibhunge indaba yenhlonipho ekhaya noma egcekeni, sibala igceke, isibaya sezinkomo kanye nendlu. Kuleli khasi ke sibheka indaba yendlu ebizwa ngendlunkulu mayelana nendaba yokuhlonishwa kwayo. Sikubalulile ekuqaleni ukuthi indlu ebalulekile ekanina wendodana, yona ke ilandelwa indlunkulu ngokubaluleka, njengoba kuyiyona eyinhloko yomuzi, okuyindlu yomnumnzane. Abasifazane abangenangeni kulendlu, kodwa kungena undlunkulu ngokuzolungisa indlu ngisho ukushanela kanye … Read more
Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yokuhlonishwa kwesibaya nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyenaba ngokuhlonishwa kwegceke. Ukuchithwa kwamanzi Umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa kumema izulu egcekeni uma liduma, kepha achithwa ngemuva kwezindlu noma othangweni nakhona awasakwa nhlobo kodwa ngesineke nangesinono … Read more
Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu akugcine ekuhlonipheni abantu, noma nezilwane kuphela, sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. Isibaya Njengoba ngenxa kudalulile … Read more
Tags Inhlonipho, Isibaya
Umuntu akafani nekhowe lona eliqhuma esidulwini, umuntu uma ezalwa kunendlela akhuliswa ngayo ehlangene nokuziphatha nenhlonipho, okuyinto ayincela ebeleni kunina futhi ewumthetho wasekhaya kubo. IsiZulu-ke sihle ngakho ukuthi wonke umuntu simbeka endaweni futhi nenhlonipho ayikhethi mabala njengotwayi. Omdala uhlonipha omncane, nomncane ngokunjalo, futhi lokhu akugcini nje ezintweni ezimayelana nezinto ezithinta abantu besilisa nabesifazane ekhaya. Kithina bantu … Read more
Tags Amagama esihlonipha, Amagama esiZulu okuhloniphisa, Inhlonipho, Isihlonipha, Ukuhlonipha, Ukuziphatha